ALAOTRA MANGORO : Tantely afa-drakotra ny fitantanana ny orinasa Fanalamanga | NewsMada
Velom-panahiana amin’ny hoavin’ny orinasa ny mpiasa.
Tafiditry ny resaka politika ny orinasa Fanalamanga ankehitriny. Manjakazaka tanteraka ny mpitantana. Mangataka ny mpisafon-draharaham-panjakana sy ny Bianco ny mpiasa, mba hijery akaiky ny fomba fitantanana ity orinasam-panjakana ity…
Mahavelon-taraina ny mpiasa ao amin’ny orinasa Fanalamanga, distrikan’i Moramanga, Faritra Alaotra Mangoro, amin’izao fotoana izao, ny fomba fitantanana ity orinasam-panjakana, mamelona fianakaviana maro ity. Tafiditry ny resaka politika tanteraka, raha ny filazan’izy ireo. Ankoatra ny fampidirana politika ny fitantana ny orinasa Fanalamanga, efa amam-bolana ireo mpiasa no nitaraina amin’ny tsy fahaiza-mitantana. “Lasa fananan’olon-tokan’ny Tale jeneraly ny orinasa Fanalamanga. Tsy mazava intsony ny fomba fitantanana ara-bola eo anivon’ny orinasa. Ataon’ity tale ity tantely afa-drakotra ny fitantanana ny orinasa, indrindra eo amin’ny lafiny ara-bola”, hoy ireo mpiasa. Nohazavain’izy ireo, fa misy fandaniana tsy tokony hidiran’ny orinasa, kanefa iantsorohany tanteraka. Tafiditra ao anatin’izany ny fitaterana ireo vehivavy 600 avy any Ambatondrazaka ho any Moramanga, nandritra ny fankalazana ny 8 marsa, Andron’ny vehivavy teo, tany an-toerana. Ny fihetsiketsehana no nahemotra noho ny fandalovan’ny rivodoza Enawo iny, saingy ny orinasa Fanalamanga kosa, no niantoka ny sakafo sy ny toerana niantranoan’ireo olona notaterina avy any Ambatondrazaka ireo. “Nahatratra 20.000ariary ny saran-dalana isan’olona no mbola niantohan’ny orinasa ho azy ireo”, hoy hatrany ireo mpiasa.
Mangataka ny IGE sy ny Bianco
Ny kitapom-bolan’ny orinasa Fanalamanga koa no nakana ny ireo olona notaterina hanolotra fanampiana ireo traboina tamin’ny rivodoza Enawo iny, izay tamin’ny alalan’ny antoko HVM, ny volana marsa teo. Ankoatra io, nahazo tambin-karama 15000 ariary isan’olona ireo rehetra nandeha nanatrika izany. Tantely afa-drakotra tanteraka ny fitantanana ny volan’ny orinasa raha ny filazan’ireo mpiasa hatrany. Raha ny loharanom-baovao avy amin’ny mpiasa, nilaza izy ireo fa efa tokony ho lany tamin’ny 22 febroary teo ny fe-potoam-piasan’ny tale jeneraly, saingy hatramin’izao, mbola tsy nasian’ny minisitera mpiahy izany. Mangataka, araka izany, ireo mpiasa ao amin’ny mba hidinan’ny eo anivon’ny Mpisafon-draharaham-panjakana (IGE) sy ny Bianco, hijery akaiky ny fitantanana ny orinasa Fanalamanga. Ny mpitantana rahateo mirehareha fa eo ambany elatry ny antoko eo anivon’ny fitondrana. Noho izany, tokony hisy ny fandraisana andraikitry ny fitondrana mahefa mba tsy ho latsaka an-katerena indray ity orinasam-panjakana ity.
Une réponse à "ALAOTRA MANGORO : Tantely afa-drakotra ny fitantanana ny orinasa Fanalamanga"
Rakotoarisoa Maminiaina N 09/05/2017 à 09:20
Salama, ohatran’ny JIRAMA ihany io e!Raisina ho tohy ny fanana-pianakaviana; tsy mijery lavitra fa izay sai-patany no atao.Fitiavan-tena no mibaiko.Mirary soa tompoko